postmarketOS inogona kutsigira Android maapplication nekuda kweAnbox | Linux Vakapindwa muropa
Kana paine chikonzero nei Android neIOS ari maviri anonyanya kushandiswa masisitimu anoshanda enhare, icho chikonzero chiri kunyanya mashandisiro avanowana. Nechikonzero chakafanana, mamwe masisitimu akadai seWindows Mobile, akaregeredzwa nevagadziri, haana kubva pasi. Nhasi kune mamwe masisitimu anoshanda emagetsi pamusika, mamwe acho akavakirwa paLinux senge postmarketOS, asi vane zvishoma kana havana zvekuita kana tisingakwanise kushandisa maapplication ane mukurumbira akadai seWhatsApp ayo atove kushandiswa nevashandisi vanopfuura mamirioni zviuru zviviri pasi rese.
Ichokwadi kuti muLinux tine zvakawanda zvinoshandiswa. Ichokwadi. Dambudziko, mukuwedzera pakusakwanisa kushandisa mamwe anozivikanwa, ndeekuti mamwe aripo haana kugadzirirwa nharembozha senge maAppleapp ari. Neichi chikonzero, ivo vanogadzira postmarketOS, iyo inoshandisa vhezheni yeshanduro yePlasma graphical nharaunda KDE, ivo vari kushanda pane mhinduro. Mhinduro iyoyo inotanga nekushandisa Bhokisi.
Anbox ichaita postmarketOS inokwanisa kushandisa Android maapplication paPinePhone, pakati pevamwe
Bhokisi chishandiso / emulator inotibvumidza kumhanyisa maapplication eApple pane yedu Linux-based operating system. Chave chiripo kwenguva yakati zvino uye, kutaura chokwadi, mashandisiro ayo haasi iye anonzwisisika kwazvo pasirese, asi postmarketOS inoronga kuita kuti zvive nyore uye nyore kushandisa. tibvumire isu kushandisa Android maapp pamafoni senge pinephone kana the Librem 5.
Tsigiro yekumhanyisa Android maapps pa postmarketOS ichiri mudiki, asi zvinotarisirwa kuti munguva pfupi kana gare gare chichava chaicho, yakavimbika uye yakagadzikana. Semaonero angu, izvi zvinogona kuchinja mitemo yemutambo, nekuti nefoni yerudzi urwu tinogona kushandisa yemahara inoshanda sisitimu nezvose izvi zvinoreva, nemutengo wakaderera uye, kune rimwe divi uye kana tikasarudza kudaro, izvo kureva kuti Zvichava kwatiri kana tichida uye tichida kuisa mapurogiramu anozivikanwa eAroid.
Izvi zvinoshandura here maonero ako nezve mafoni achishandisa Linux-based mobile operating system?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » postmarketOS, Linux-based mobile operating system, inogona kutsigira maapplication eApple nekuda kweAnbox
Imwe yemapoinzi akakosha kazhinji ndiwo mutengo. Ndinovimba iri mukati meyero yetsika SmartPhones.